UGoogle utyhila i-Android 8.0 Oreo kunye nazo zonke iindaba zayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UGoogle utyhila i-Android 8.0 Oreo kunye nazo zonke iindaba zayo
UJose Alfocea | | Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Itekhnoloji enkulu uGoogle ubhengeze ngokusesikweni isizukulwana esilandelayo senkqubo yokusebenza kwezixhobo zefowuni enegama lokugqibela eliye laba UAdroid 8.0 Oreo.
Le nguqulo intsha ye-Android ifika phantse unyaka emva kokuba i-Android Nougat ityhiliwe, kwaye iyayenza loo nto izinto ezintsha ezili-XNUMX Oku kubandakanya inkxaso yemifanekiso-kumfanekiso, abalinganiswa abatsha be-emoji okanye inkqubo entsha yokuxela izaziso ezintsha kwizicelo.
I-Android 8.0 Oreo, isindululo esitsha sikaGoogle sedivayisi eziphathwayo
Inguqulelo entsha ye-Android 8.0 Oreo yazisa inqaku elitsha elenza kube lula kumsebenzisi ukuba azi ukuba banezaziso ezintsha kwizicelo. Imalunga ne "Amachaphaza ezaziso" okanye amanqaku ezaziso, oko kukuthi, inkqubo efana kakhulu nale sele ikhona kwi-iOS, uhlobo "lwebheji" kwi icon yeapp ebonisa ubukho bezaziso ezintsha. Ukongeza, umshicileli omde kwi icon ye-app ekuthethwa ngayo iya kubonisa ulwazi olufana nesaziso sokugqibela esifunyenweyo.
Kwelinye icala, i Inkxaso yomfanekiso-mfanekiso (PIP) ivumela abasebenzisi ukuba baqhubeke nokubukela umxholo wevidiyo ngelixa besebenzisa ezinye usetyenziso (ividiyo iyadada kwiscreen ngobukhulu obuncinci) ngelixa umsebenzi omtsha ukugcwalisa ngokuzenzekelayo iya kuyikhumbula ulwazi lokungena ukuze ikhawuleze kakhulu ukufaka iziqinisekiso zokufikelela: igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
I-Android 8.0 Oreo ikwabandakanya Inkxaso yeempawu ezintsha ze-Unicode ezili-10 ze-emojiPhakathi kwayo kukho imfazwe, i-vampire, i-zombie, i-hedgehog, i-giraffe, i-cookie eninzi okanye inhlanhla kunye nezinye ezininzi. Kwelinye icala, ezinye ze-emoji ze-Android ziphinde zenziwa ngokutsha.
Las ii -apps ezikhawulezileyo, zenzelwe ukuvumela ababhekisi phambili ukuba benze izicelo ezinokuqhutywa ngephanyazo ngaphandle kokufuna ukukhutshelwa okanye ukufakwa, ngoku zinikwe amandla ngokungagqibekanga, kunye noGoogle iphucule isantya esipheleleyo senkqubo yokusebenza ukunciphisa amaxesha okusungulwa kwesicelo, ngelixa ukwazisa izincedisi zokhuselo.
Uhlaziyo sele lufumaneka kwiwebhusayithi yeProjekthi yoMthombo ovulekileyo we-Android, nangona uGoogle ecwangcisa ukuyikhupha kwizixhobo zePixel kunye neNexus kungekudala. Zonke iindaba sele zifumaneka ngokweenkcukacha kwiwebhusayithi kaGoogle apha.
Nangona abanini bezixhobo zePixel kunye neNexus banokuqiniseka ukuba baya kuba nakho ukufikelela kwi-Android 8.0 Oreo kungekudala, Abanini bee-smartphones ze-Android ezivela kwezinye iimveliso kuya kufuneka balinde ixesha elide, becinga ukuba baya kufumana uhlaziyo. Khumbula ukuba ngeli xesha, phantse unyaka emva kokumiliselwa kwayo, i-Android Nougat ayifikeleli kwipesenti ze-13,5 zezixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » UGoogle utyhila i-Android 8.0 Oreo kunye nazo zonke iindaba zayo
USamuel Marin sitsho
Phendula uSamuel Marin
Uluhlu lweefowuni oluya kufumana i-Android 8.0
I-Galaxy Note 8 inokuba yeyona fowuni ibiza kakhulu eyakhe yenziwa yi-Samsung